အာဒံနှင့် Gaia သည်ကမ္ဘာ Impregnation ဂိမ်း
မှကြွလာသောအခါညမ်းဂိမ်းများရှိပါတယ်၊အားလုံးအမျိုးမျိုး၏အမျိုးအပေါ်မှာအခြေခံပြီးအမျိုးမျိုးဖြစ်သေား။ ရှိပါတယ်ဂိမ်းမှရိုးရှင်းတဲ့လိင် simulators အရပ်၌ရှိကြသောစိုက်တွေအများကြီးပေါ်ဇာတ်လမ်းနှင့်ဇာတ်ကောင်အဆောက်အဦ။ သို့သော်၊ကျွန်တော့်အနှစ်ဖှငျ့အတွက်အရွယ်ရောက်ပြီးဂိမ်းကစားစက်မှုလုပ်ငန်း၊ငါမြင်ဖူးဘူးတစ်ခုနှင့်အတူဂိမ်းထိုကဲ့သို့သောဆောင်ပုဒ်။ ရှိသည်ဖို့ချင်တယ်ဆိုရင်သင်အနည်းငယ်ပျော်စရာနှင့်သမုဒ္ဒရာကဲ့သို့ခံစားရတဲ့ဘုရားသ၊စားအာဒံနှင့် Gaia။ ငါသည်မသိရပါဘူးလျှင်အမည်ကိုအသင်မည်သည့်စိတ်ကူးအကြောင်းအဘယ်သို့အရေးယူဖြစ်ပါသည်၊ဒါပေမယ့်စဉ်းစားကြည့်ရအောင်မှတဆင့်ဤ။ အာဒံသည်ပထမဦးဆုံးလူယောက်ျား၊ဘယ်သူရဲ့အမျိုးအနွယ်ကိုပေါ်သွားဖန်တီးရန်လူသားထု။, အဖြစ်အ Gaia၊သူမ၏အမိမြေ၊သဘာဝကိုယ်တိုင်ကသောလိုအပ်ချက်များအတွက်မျိုးအောင်ခြင်းကိုခံရနိုင်ရန်အထာင္ခန္း။
သင့်ပေးသင်မည်သည့်ပိုပြီးအရိပ်အမြွက်? ဒီ impregnation ဂိမ်း။ သို့သော်ရုံသာမကမည်သည့်မျိုး၏impregnation ဂိမ်း။ သင်သွားလိမ့်မည်အ baren ပြည်ဟာတိုးတက်နေတဲ့နိုင်ငံ၊နှင့်အတူအားလုံးသင့်ရဲ့ကြက်နှင့်ယုတ်။ အာဒံနှင့် Gaia သည်ကမ္ဘာတည်ဆောက်ခြင်းရှိကြသည့်အတွက်မှရလိမ့်မယ်စူးစမ်းရှာဖွေမြေပုံအဘို့အရှာဖွေနေၡမ်ားယင်းနှင့်အကြောနေသောမကောင်းဆိုးဝါးဖြစ်ဖို့အဆင်သင့် railed အတွက်စိတ်ပညာနည်းလမ်းဖြစ်နိုင်ကြောင်းဒါကြောင့်အ planed ပြည့်စုံလိမ့်မည်ဘဝနှင့်အတူနောက်တဖန်အ။ အရာအားလုံးအကြောင်းကိုဂိမ်းအပေါ်ဖြစ်ပါတယ်။ အများကြီးရှိပါတယ်မယ်၏အရေးယူသွားကြောင့်၊ဤအကြိုးဂိမ်း၊ဒါမှမဟုတ်လည်းဖြစ်လူသိများတဲ့စာသား-အခြေပြုဂိမ်း။, ဒါပေမယ့်အချို့ရှိပါတယ်ဂရပ်ဖစ်ကိုယ်စားပြုအစာ၊အရာဖို့ရည်ရွယ်နေကြပါတယ်၏ဂုဏ်လိုအပ်။ သို့သော်၊အပျော်အပါး၏ဤဂိမ်းကစားထံမှလာ၏ဇာတ်လမ်းအရာ၌သင်ခံရလိမ့်မည် immerged။ အားလုံးခြုံကြည့်သော်၊ဤအဆုံးစွန်သော impregnation။ သင်ဖန်တီးနေတဲ့ကမ္ဘာနှင့်အတူသင့်ရဲ့ကြက်။ ကြောင်းဘယ်လောက်အေးမြသည်?
အရာနှစ်ခုရှိပါတယ်အောင်ဒီဂိမ်းထဲမှာတော့အံ့။ ကျွန်တော်ပြောနေတာဘာအကြောင်းဇာတ်လမ်းအကြောင်းမည်သို့ကောင်းစွာရေးသားသည်။ သင်ချင်တယ်ဆိုရင်လိမ့်မည်ကြောင်းအရာတစ်ခုခုသင်၊အဘယ်အရာကိုပိုကောင်းခေါင်းစဉ်ထက်အခြားနေဖို့အသက်တာ၏။ အ impregnation သေားဤဂိမ်းအတွက်အယူအမြတ်ပုံသဏ္ဍာန်အခါဟူသောအချက်ကိုစဉ်းစားဘူးပဲလေပည္ဆိုင္ရာအတွင်းအချို့ slut pussies။ သင့်ရဲ့ပည္ဆိုင္ရာအမှန်တကယ်အောင်အသက်ကြီးထွား၊နှင့်ကျွန်တော်ထင်တာကနှစ်ဦးစလုံးပူနဲ့လှပတဲ့တချိန်တည်းမှာပင်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်၊လမ်းဇာတ်လမ်းအဖြစ်ရေးတွန်းအားပေးလိမ့်မည်သင်၏ခလုတ်အတွက်နည်းလမ်းမဟုတ်ခဲ့ပါပင်သိနိုင်တွန်း။, သင်အမည်ရအမျိုးသမီးများနှင့်ဒဏ္ဍာရီသတ္တဝါလိုအပ်ကြောင်း impregnate ဂိမ်းတစ်လျှောက်လုံး။ ငါအများအပြားဒဏ္ဍာရီနှင့်ယဉ်ကျေးမှုခဲ့ကြကြောင်းထည့်သွင်းပြီးဒီဂိမ်းအတွက်။ ကိုယင်းဂိမ်းအတွက်ဖြစ်ကြောင်းအားဖြင့်မှုတ်သွင်းအစာအတွက်ပစ္စုပ္ပန်အဆိုပါဒဏ္ဍာရီ၏ဖန်ဆင်းခြင်းကနေဤမျှလောက်များစွာသောသတင်းရင်းမြစ်။ ကိုလည်းသင်ရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်အပြားအရွယ်ရောက်အက္ခရာပေါ်အခြေခံပြီးနေကြတယ်ဖြစ်ကြောင်းတိရိစ္ဆာန်များအတူထုံးစံအတိုင်းကလေးမွေးဖွား၊ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်ၡမ်ားချစ်စရာယုန်နှင့်ပျား။ Centaurs၊ဖွယ်ရှိ၊နှင့်အမျိုးမျိုး၏အခြားချစ်စရာမိကျောင်းရှိသည့်အပြင်ဂိမ်းအတွက်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်၊သင်သည်လည်းအများကြီးတွေ့လူ့ငယ်များကိုသင့်ရဲ့လမ်းအပေါ်။
အာဒံနှင့် Gaia ဟာအကောင်းဆုံးဂိမ်းတွေထဲကတစ်ခုဖြစ်ခဲ့သူများအတွက်အကြိုးအမျိုးအစားများနှင့်၎င်း၏အထောက်အထားမလိုအပ်ပါကြောင်းထင်ဂရပ်ဖစ်ကိုဖန်တီးရန်တစ်လက်။ သို့သော်၊ဂိမ်းရဲ့အမွတ္ထားမကြည့်ကောင်းနှင့်ကနူးရဲ့နှစ်ဦးစလုံးသွားလာရန်လွယ်ကူခြင်းနှင့်အကျိုးရှိစွာ။ အားလုံးအရင်း၊အဆိုပါစာရင်း၊အရည်အချင်းနှင့်အခြားအရာအားလုံးသင်လိုအပ်လူသတ်သမားဂိမ်းတွင်တွေ့နိုင်ပါသည်အတွက်လက်ဝဲလက်ဘက်မျက်နှာပြင်၏။ အဲဒီဇာတ်လမ်းကိုပြတင်းပေါက်ဘယ်မှာအားလုံးအရေးယူဖြစ်ပျက်။, အပေါ်တစ်ဦးအဝါရောင်သားရေကဲ့သို့နောက်ခံအရောင်ရလိမ့်မယ်တစ်ဦးကောင်းစွာတိကျမ်းစာပုံပြင်နှင့်အတူဒါကြောင့်အများကြီးအသေးစိတ်အကြောင်းအရာတောင်မလိုပါဘူးလိုအမြင်အာရုံနိမိတ်။ သို့သော်၊သင်အချို့သောရုပ်တုဆင်းတုကြောင်းသင်ကူညီလိမ့်မည်နောက်ထပ်အတွက်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဇာတ်လမ်း။ ငါဘယ်လိုဇာတ်ကောင်အတွက်ကိုယ်စားပြုနေကြသည်။ တစ်ဖက်တွင်ကျွန်တော်တို့အားလုံးအၡမ်ားမကောင်းဆိုးဝါးနေသောအားဖြင့်ကိုယ်စားပြုချို့တြန္းနှင့်လိုးစာလုံး၊အရာအချို့ကိုသင်ကအသိအမှတ်မပြုစေခြင်းငှါ။ နှင့်မှကြွလာသောအခါလူ့ငယ်၊သင်သေချာမသိတဲ့အခါသူတို့ကိုမြင်ရပါလိမ့်မယ်ဘယ်လောက်ကိုယ်စားပြုနေကြသည်။ အကောင့်အသုံးပြု၏ဓါတ္ပံုကျော်ကြားညစ်ညမ်းကြယ်များအတွက်အပြန်အလှန်နှင့်အတူငယ်။, Faye Regan၊အနည္မ်ားနှင့်ခေတ် Addams ကြားများမှာအငယ်သောသူရှိကြ၏သို့လှည့်ဇာတ်ကောင်ဒီဂိမ်းအတွက်။ သင့်ရဲ့မစ်ရှင်လိမ့်မည်အသွားအဇာတ်လမ်းနှင့်အသုံးပြုမှုနှင့်အားလုံးသင့်ရဲ့အတွက်မဟာဗျူဟာနည်းလမ်းများကြောင်းအာမခံလိမ့်မည်စုစုပေါင်း impregnation များအားလုံးယင်းဂိမ်းအတွက်။
ကစားဒံနှင့် Gaia အခမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆိုက်ပေါ်တွင်
ဤသည်၏တစ်ခုဖြစ်သည်သူတို့အားအံ့ဘွယ်သောလုပ်ထာင္သူမ်ားသည္။ က ahs အရာအားလုံးပြည့်စုံကြောင်းဒါကြောင့်၊ဇာတ်လမ်းကြံစည်မှုဖို့စတိုင်နှင့်ဂရပ်ဖစ်။ အတွက်ကြိုးဂိမ်းဖြစ်ပါတယ်၊ဒါကြောင့်အများကြီးပိုပြီးစိတ်လှုပ်ရှားစရာထက်ပျမ်းမျှ၏စက်မှုလုပ်ငန်း။ ဒါကဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကိုအတူတကွအလုပ်လုပ်ခဲ့နှင့်အတူမိမိတို့အပရိသတ်ကိုတမ္းထည့်အမျိုးမျိုးတာင္းတယ္။ ဝမ်းနည်းစရာ၊အဆိုပါစီမံကိန်းရပ်တန့်ခဲ့သည်။ ရှိလိမ့်မည်မဟုတ်မည်သည့်အသစ်မွမ်းဖို့ပုံပြင်သို့မဟုတ်အသစ်ဇာတ်ကောင်။ ဒါပေမယ့်ငါသေချာပါတယ်သင်ရှိသည်လိမ့်မယ်အများအပြားနာရီနှင့်အတူပျော်ရွှင်စရာအရေးယူဂိမ်း၏အဖြစ်ကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။
သင်ကကစားနိုင်ပါတယ်အားလုံးအတွက်အပြည့်အဝကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝက်ဘ်ဆိုက်နှင့်အတူ၊အဘယ်သူမျှမ paywalls မစမ်းကန့်သတ်ခြင်းနှင့်အဘယ်သူမျှမအန္တရာယ်ရတဲ့၏သင့်ရဲ့အထောက်အထားနှင့်ထိတွေ့သို့မဟုတ်သင့်ကိရိယာကူးစက်။ သင်လိုအပ်သမျှအင်တာနက်သုံးစွဲခွင့်နှင့်ဤဂိမ်းဖို့အဆင်သင့်ပါပဲကစား။ ကအလုပ်လုပ်တယ်အပေါ်လုံးဝမည်သည့်စက်ကိရိယာမှကွန်ပျူတာနှင့်မက်မှနှင့်ပတ်သက်။ ကြောင်းရဲ့ဘယ်အရာကိုကျွန်ုပ်တို့၏ဆိုက်အထူး။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤဂိမ်းအခမဲ့အားလုံးပလက်ဖောင်းများအနှံ့၊ကျနော်တို့တောင်မှပေးအခွင့်အလမ်း၏တိုးကယ်ဖို့၊မှတ်ချက်အပေါ်ဂိမ်းနှင့်အလံလျှင်ကျွန်တော်တို့ကိုတစ်ခုခုအမှားအယွင်း။ သို့သော်၊ကျနော်တို့သေချာနေဘာမှမသွားလိမ့်မည်မှားသောကြောင့်၊ကျနော်တို့အရာအားလုံးကိုစမ်းသပ်ပြီး။ ခံစားကြည့်ပါ!